Haweenay saygeeda ku iibinaysa lacag dhan $20 kun oo doolar | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / Haweenay saygeeda ku iibinaysa lacag dhan $20 kun oo doolar
Haweenay saygeeda ku iibinaysa lacag dhan $20 kun oo doolar
Himilo FM – Haweenay u dhalatay dalka Jarmalka ayaa qaaday tallaabo dhalisay dood xooggan kaddib markii ay soo bandhigtay in laga iibsado ninkeeda sida uu ku soo waramayo wargeyska “The Sun” ee dalka Ingiriiska.
Haweenayda ayaa sheegtay inay ka quusatay aragtiyada aan wanaagsaneyn ee ninkeeda, sidaa darteed waxay soo dhigtay bogga “eBay” iyadoo ku naadineysa lacag dhan 18 kun oo Euro oo u dhiganta 20 kun oo doolar.
Haweenayda oo 40 jir ah kana soo jeeda magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa ku sheegtay xayeysiinteeda inay xaas tahay muddo toddobo sanno ah hase ahaatee ay garowsatay hadda in iyada iyo ninkeeda aysan niyad ahaan wada joogin.
“ Marwooyinkeyga qaaliga ahow, cidda uu khuseeyo qoraalkan, waxaan oggaaday in ninkeyga aanan wada joogin niyad ahaan, waxaan doonayaa inaan ka tago, waxaa ii farxad ah inaan ka wada hadalno qiimaha lacageed,” ayay qoraal ku tiri haweenayda oo adeegsaneysa magac aan dhab aheyn.
Waxay intaa raacisay haweenayda in uusan culeys jirin oo loo baahan yahay in lagala soo xiriiro cinwaankeeda gaarka ah.
Sababta ay ku dooqatay lacagta 18 kun ee Euro ayay ku sheegtay in tirsiga 18 uu yahay nasiibkeeda.
Warbaahinta Jarmalka ayaa ka soo xigatay haweenayda in ninkeeda uusan ka war heyn xayeysiinta illaa uu oggaaday markii lagu daabacay wargeyska “The Sun”
Sheekada haweenaydan ayaa la kulantay layaab badan, dadka qaar ayaa ku qoslay laakiin waxay sheegtay inay dhab ka tahay inay iibiso ninkeeda.
Previous: UNICEF: 400 kun oo cunug oo dhalan doona maalmaha ugu horreeya 2019
Next: Roberto Martinez oo Eden Hazard kula taliyay in uu sii joogo Chelsea.